मेसु क्वार्टरमा पुरानैको कब्जा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २७, २०७६ भूषण यादव
वीरगन्ज — गत असार १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगन्जको नारायाणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. मदनकुमार उपाध्यायलाई नियुक्त गर्‍यो । यसअघि उपाध्याय मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै आएका थिए । नयाँ ठाउँमा सरुवा भएको करिब एक महिनापछि साउन २२ मा उपाध्याय नारायणी अस्पतालमा हाजिर भए ।
बुधबार पदभार सम्हालेका उपाध्यायले बिहीबार अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीसँग परिचायात्मक कार्यक्रम गरे । शुक्रबार बिहानै उनी मन्त्रालय काज मिलाएर काठमाडौं गएका छन् । वीरगन्जको होटल पुजनमा दुई दिन बसेर नवनियुक्त मेसु उपाध्याय अस्पताल हाजिर भएका थिए ।
‘सरुवा भएको धेरै दिनपछि अस्पताल हाजिर भएकाले होला, क्वार्टरमा साथीहरू बसिरहनु भएको रहेछ,’ मेसु डा.उपाध्यायले भने, ‘अब आएपछि साथीहरूले व्यवस्थापन गर्लान् नि ।’ यसअघिका मेसु डा. एनामुल हकले मेसु क्वार्टर खाली नगरेकाले नयाँ मेसुलाई होटलमा बसाउनु परेको अस्पतालका कर्मचारीले बताएका छन् ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश चौधरीले पुरानो मेसुले क्वार्टर खाली नगरेकाले नयाँ मेसु होटलमै बस्नु परेको जनाए । पुराना मेसु परिवार सहित क्वार्टरमै बसिरहेका छन् । ‘अस्पतालको मेसु नयाँ मान्छे नियुक्त भएदेखि नै पुरानोले मेसुले क्वार्टर छाडिदिने चलन छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रशासन फाँटका एक कर्मचारीले भने, ‘पद गएको ४० दिन बितिसक्दा पनि मेसु क्वार्टर खाली नगर्नु निन्दनीय विषय हो ।’
दशौँ तहका डा. एनामुल हक ०७४ असोज २९ देखि निमिक्त मेसुका रूपमा नारायणी अस्पतालको प्रशासनिक कार्य गर्दै आएका थिए । १३ गुणा बढी मूल्यमा औषधि खरिद, मनोमानी ढंगले बिना दरबन्दी कर्मचारी नियुक्त, महँगो किलिया मेसिन सस्तोसँग साटेको, कोटेसनमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काम गराएको, मिलोमतोमा क्याथल्याबको टेन्डर प्रकाशित गरेको लगायतका समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले असार १५ मा एघारौँ तहका डा. मदन कुमार उपाध्यायलाई नारायणी अस्पतालको मेसु नियुक्त गरेको थियो ।
‘पुरानो मेसुले नयाँलाई स्वागत गर्नुपर्थ्यो, अस्पताल बारे ब्रिफ गर्नुपर्थ्यो,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसो गर्नुको साटो अस्पतालको मेसु बस्ने क्वार्टर पनि खाली गरिएको छैन, नैतिकताको अभाव देखियो ।’ अस्पताल स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको नयाँ मेसुलाई जसरी पनि फिर्ता पठाउने स्थानीय केही नेताको साथ पाएका पुराना मेसुले असहयोग गरिरहेका छन् ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार नयाँ मेसु सरुवा लगत्तै नआएको मौका छोपी पुरानो मेसु डा. हकले असार मसान्तमा थप १५ जना दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र डा. हकले करिब ४ दर्जन चिकित्सक तथा कर्मचारी बिना प्रतिस्पर्धा र बिना दरबन्दी दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका थिए ।
गत वैशाख ११ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाको टोलीले अस्पतालमा छापामारी विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले अस्पताल भित्रको अनियमितता बारे छानबिन थालेको ३ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नतिजा नआएकोमा कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘अख्तियारको कतिपय प्रश्नको जवाफ पुराना मेसुले आफू खुसी लेख्न लगाएर पठाउने गरेका थिए,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अख्तियारको छानबिन असाध्यै ढिला भयो ।’
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:३७
रौतहट — एक साताअघि इलाका प्रहरी डुमरियाले चन्द्रनिगाहपुरबाट गरुडातर्फ जाँदै गरेको टेम्पु रोकेर जाँच गर्‍यो । टेम्पुमा दुई महिला चढेका थिए । उनीहरू बसेको सिटमुनि दुईवटा जर्किन भेटियो ।
चन्द्रपुर ४ घर भएका महिलालाई प्रहरीले केरकार गरेपछि उनीहरू मदिरा बजार पुर्‍याउन लगेको स्वीकार गरे । गरुडा, शिवनगर, बिर्ता, धमौरालगायतका बजारमा चन्द्रनिगाहपुरबाट घरेलु मदिराको बिक्री वितरण हुन थालेपछि प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बस, ट्रक, साना सवारीको जाँचमा कडाई गरिएको बताए ।
घरेलु मदिरा ओसारपोसारमा रौतहटमा अहिले महिला सक्रिय देखिएको छ । मदिरा ओसारपोसारमा महिलाको संलग्नता बढेपछि प्रहरीले साना तथा ठूला सवारीमा निगरानी बढाएको छ । बाध्यताले मदिरा बिक्री गरेको महिला स्विकाछन् । पक्राउ परेका महिलाको साथबाट बरामद गरिएको मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको थियो । पछिल्लो समय घरेलु मदिराको ओसारपसारमा महिलाको संलग्नता बढेको एसपी खत्रीले बताए । ‘मदिरारहित जिल्ला बनाउन अभियान थालेका हौं,’ उनले भने, ‘मानिसमा चेतनाको कमीले अवैध मदिरा उत्पादन गर्न छाडेका छैनन् ।’ शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पारेको भन्दै प्रहरीले जिल्लाभरि अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा कडाइ गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरीबाट खटिएको टोलीले बिहीबार राति गौर नगरपालिका ६ सवगडा र राजदेवी नगरपालिका ८ स्थित लक्ष्मीपुरमा अवैधरूपमा सञ्चालन गरेको २ वटा घरेलु मदिरा भट्टी र मदिरा बनाउन तयार गरी राखिएको कच्चा पदार्थ २ हजार २ सय लिटर, तयारी मदिरा ५ सय लिटर नष्ट गरेको थियो । मदिरा बनाउने मेसिन थान १, कच्चा पदार्थ राख्ने खाली ड्रम थान ६ बरामद गरिएको प्रहरीले जनायो ।
अघिल्लो महिनामा इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुरले झन्डै २ हजार लिटर मदिरा बरामद गरेर नष्ट गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा ५४ वटा अवैध भट्टी नष्ट गरिएको छ । झन्डै १० हजार लिटर तयारी मदिरा बरामद गरी नष्ट गरेको जनायो । ११ हजार ७ सय लिटर मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको एसपी खत्रीले बताए । मदिरा बनाउने विभिन्न खाले १ सय ३२ वटा भाडा बरामद गरेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:३५